5 Uru na uru nke ọnọdụ SEM | e-azụmahịa ozi
ECommerce ozi ọma | 13/04/2022 10:49 | Emelitere ka 13/04/2022 10:57 | SEM
La Atụmatụ SEM Eji mara ya site n'inye nsonaazụ n'ime obere oge dị mkpirikpi. Nke a na-atụgharị n'ime mmụba nke ndị ahịa na ahịa.
Tụnyere atụmatụ ndị ọzọ, ị nwere ike ịhụ mgbanwe nke ụlọ ọrụ gị nwere ike nweta na SEM n'ụzọ dị ukwuu karị, ịbụ atụmatụ ọkacha mmasị nke ndị ọchụnta ego ọhụrụ.
Ọ bụrụ na anyị na-ewere nzọụkwụ mbụ anyị na webụ ma akara anyị enwetala webụsaịtị ya na netwọkụ mmekọrịta, ọ ga-abụ ezigbo ihe ịma aka idobe onwe anyị n'etiti nsonaazụ mbụ nke ọchụchọ enweghị usoro. Ọ bụ nrọ nke ọtụtụ ụdị ka ha so na nsonaazụ mbụ nke Google, mana ọ bụghị ọrụ dị mfe iji nweta ya organically.
Ọ bụrụ na ịgakwuru onye ọkachamara na-ere ahịa na-achọ nsonaazụ n'ime obere oge, ha nwere ike ịtụ aro ohere abụọ, SEO ma ọ bụ SEM n'ọkwa. Ma ọ bụ na nhọrọ nke abụọ ka anyị ga-emesi ike n'ụzọ pụrụ iche n'ime isiokwu a.
SEM bụ okwu mkpọ okwu maka Njikwa Ngini Nchọnchọ, na ọ bụ atụmatụ a na-akwụ ụgwọ nke na-enye anyị ohere ịzụta ebe mbụ wee pụta na nsonaazụ ọchụchọ mbụ na isi search engines dị ka Google, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Nkọwa nke SEM dị nnọọ mfe, na ịghọta ntakịrị ihe gbasara atụmatụ a, anyị ga-achọ ịgwa gị okwu ozugbo gbasara uru ya kachasị mkpa:
1 Mmụba ngwa ngwa na okporo ụzọ webụ
2 Nhazi ka mma na ngalaba
3 Nleba anya dị mfe
4 Ọ bụ ezigbo nkwado maka SEO
5 Nnweta ndị ahịa
Mmụba ngwa ngwa na okporo ụzọ webụ
Ọ bụghị ndị ọbịa niile nwere ike debanye aha maka ọrụ ahụ ma ọ bụ zụta ngwaahịa a, mana okporo ụzọ ka mma na-atụgharị gaa na ọkwa ka mma.
Anyị chọrọ mụbaa nleta na webụsaịtị anyị, na nkwado nke Google Adwords na atụmatụ SEM, anyị ga-enweta nke a na obere oge.
Anyị ga-aghọta na a chọrọ ego itinye ego, ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka oge itinye ego, anyị ga-azọpụta nnukwu ego.
Nhazi ka mma na ngalaba
A ghaghị ilekwasị anya na atụmatụ dị mma na akụkụ nke ahịa iji mee nweta nsonaazụ dị irè karị. Ndị na-ege ntị ika anyị bụ ndị nwere afọ dị iche iche, okike, ọnọdụ na mmasị. Anyị nwere ike ịtọ mkpọsa n'ime awa na ụbọchị nke mgbasa ozi ika anyị ga-apụta iji weghara otu akụkụ.
Nleba anya dị mfe
Ogo nke atụmatụ anyị na-etinye na mkpọsa anyị na-adabere n'ụzọ dị ukwuu n'ikike nha ọ na-enye anyị. Inwe ike nyochaa usoro ahụ n'oge ga-enye anyị ohere ịme mkpebi banyere ọganihu ahụ ma chọpụta ma ọ bụrụ na ọ ga-esi na ya pụta dị ka a tụrụ anya ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa mgbanwe.
Mgbasa ozi SEM na-enye anyị ọtụtụ ozi anyị nwere ike jiri Google Analytics nyochaa n'ụzọ zuru ezu, dị mma maka ịlele ọkwa mmasị nke ndị ọrụ na-eleta weebụsaịtị anyị.
Ọ bụ ezigbo nkwado maka SEO
O siri ike ikewapụ onwe anyị na SEO atụmatụ o Nchọpụta Nchọpụta NchọpụtaYa mere, ngwakọta nke usoro abụọ ahụ nwere ike nweta nsonaazụ ka mma. Ọ bụrụ na anyị na-emepụta ọdịnaya dị mma, yana atụmatụ mgbasa ozi SEM; enwere ike ịkwalite nsonaazụ ya nke ukwuu.
Itinye ego n'ahịa ahịa na-ekwe nkwa na anyị ga-enweta nnukwu iru eru, yana dịka ụlọ ọrụ, Ọ bụ ihe mgbaru ọsọ anyị ịdọta ọtụtụ ndị ahịa. Site na mgbasa ozi na-aga nke ọma, anyị nwere ike ịtụgharị okporo ụzọ ahụ ka ọ bụrụ ndị ahịa, na-egbochi ha ịbụ naanị nleta na-enweghị ịzụrụ ihe ma ọ bụ were ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » SEM » 5 Uru na uru nke nhazi SEM